မျှော်လင့် နေဆဲဘဲ: May 2012
Posted by Mr Htay Tint at 9:28 AM0comments
ပြည်သူကို စော်ကားခဲ့တဲ့ သမတအကြံပေးအဖွဲ့ ထဲက နိုင်ငံရေးအကြံပေးခေါင်းဆောင် ကိုကိုလှိုင်။
သမတရဲ့နိုင်ငံရေးအကြံပေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ကိုကိုလှိုင်အကြောင်း စပြီးပြောပြဖို့ဖေါ်ပြဖို့လိုပါပြီ။ ဒီ နိုင်ငံရေးအကြံပေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ကိုကိုလှိုင်ကို မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား MRTV4ကြည့်ဖူးသူတွေကတော့ မြင်တွေ့ မှာပါ။ နိုင်ငံတကာရေးရာတွေကို မစားရ၀ခမန်း လျှာအရိုးမရှိတဲ့အတိုင်း ပြောနေသူတစ်ဦးဆိုတာကို။
၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ မေလ (၂၉) ရက်နေ့ ထုတ် နအဖရဲ့ကြေးမုံသတင်းစာ စာမျက်နှာ (၈) မှာ “နှစ်အကူးမှာတော့ ပုရစ်ဖူးတို့ဝေကြပေလိမ့်မည်” ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးပါ။ ဒီဆောင်းပါးထဲမှာ နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် သစ်ပင်တွေပြိုလဲရှင်းသွားတာကြောင့် ရွှေတိဂုံဘုရားကြီး အထက်ပစ္စယံအနားထိကို အိမ်ဝရံတာကနေ လှမ်းဖူးမြော်ခွင့်ရတာမို့နာဂစ်မုန်တိုင်းကြီးကို ကျေးဇူးတင်ရတယ်ဆိုပြီး အစချီကာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ကြောက်မက်ဖွယ် နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်မှုကို သိန်းပေါင်းမြောက်မြားစွာသော မြန်မာပြည်သူတွေ သေကြေပျက်စီး ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာ ဒီလိုရေးသားမှုဟာ အင်မတန် မသင့်လျော်လွန်းလှတာကို အားမရသေးဘဲ၊ နအဖသန်းရွှေတို့ ရဲ့နာဂစ်မုန်တိုင်း ခုတုံးလုပ် ဒေါ်လာငွေ တောင်းရမ်းကာင်းဖို့ အတွက် အလိမ်အညာ ဟန်ပြလုပ်ရပ်တွေကို ချီးမွန်းရေးသားပြထားပြီး၊ ဆောင်းပါးနောက်ဆုံးမှာ နိုင်ငံတကာက နာဂစ်မုန်တိုင်းအလှူပစ္စည်းတွေ အစားအသောက်တွေထက် ချောင်းမြောင်းထဲမှာ ငါးရှာစား ဖားရှာစားဖို့ ကို ပြောဆိုရေးသားထားတာကတော့ အလွန့့် ကို မိုက်ရိုင်းစော်ကားလိုက်ခြင်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူပြည်သား မုန်တိုင်းဘေးဒုက္ခသည်တွေကို နိုင်ငံတကာ ပြည်သူများက ကိုယ်ချင်းစာပြီး စေတနာထက်သန်စွာနဲ့ပေးပို့ လှူဒါန်းကြတာကို ကိုယ်ကိုတိုင်လည်း မကူညီ သူများကူညီတာလည်း နှောင့်ယှက်ကြတဲ့ သန်းရွှေတို့ အာဏာရူးတွေဘက်ကို ဖော်လံဖားပြီး ရေးသားတာထက်ပိုပြီး ဒုက္ခရောက်နေကြသူ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကို ကိုယ်ချင်းစာတရား ခေါင်းပါးစွာနဲ့ဒီဆောင်းပါရေးသားသူ “လှိုင်အောင်” ဆိုသူကတော့ အခု သိန်းစိန်ရဲ့နိုင်ငံရေးအကြံပေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် “ကိုကိုလှိုင်” ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာ အများပြည်သူ သိရအောင် ဖေါ်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ဒီလို ဆောင်းပါးရေးသားပြီး မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကို စော်ကားခဲ့သူ လှိုင်အောင်အမည်ခံ လူယုတ်မာ ကိုကိုလှိုင်ရဲ့ဆောင်းပါးကို အပြည့်အစုံ ပြန်လည်ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဆောင်းပါးရှင် လှိုင်အောင် က “ လူပေါင်းသန်းနှင့် ချီတဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ နာဂစ်လေဘေးဒုက္ခသည်တွေဟာ " နိုင်ငံတကာ အကူအညီ မလိုဘူး၊ ဖားရိုက် စားပြီးနေလို့ရတယ်" .... ဒါ့ အပြင် .... "ရွှေတိဂုံဘုရား စိန်ဖူးတော်ကို မြင်ရလို့ ၊ လူ ၁သိန်း ခွဲကျော်သေဆုံး၊ (၂.၅) သန်းအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်စေ ခဲ့တဲ့ လူသတ်နာဂစ် မုန်တိုင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း" ဦးနှောက်မရှိ၊ လူသားမဆန်တဲ့ အောက်တန်းကျကျ ရေးသားထားတာကို ဖတ်ရသူတိုင်း သိရသူတိုင်းက ဒီဆောင်းပါးရှင်ကို ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ မသိခဲ့ကြပါဖူး။ ဆောင်းပါးရှင်ကို ကြိုးနဲ့ တုတ်ပြီး မုန်တိုင်းဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသက ချောင်းမြောင်းတွေထဲ သွားပစ်ချပြီး သေဆုံးသွားရတဲ့ ပြည်သူတွေအလောင်းတွေကြားထဲ နှစ်သတ်ပြီး အဲ့ဒီက ငါးတွေ ဖားတွေကို ပေးစားအောင်ကို ဒေါသထွက်ကြရတယ်ဆိုတာ အများပြည်သူတွေ ခံစားကြရပါတယ်။
ငါးရှာစား ဖားရှာစားဆိုပြီး ပြောခဲ့တဲ့ လှိုင်အောင်ကတော့ အာဏာရူး သန်းရွှေတို့ ရဲ့လက်ပါးစေအကြီးစား ယခု သိန်းစိန်ရဲ့နိုင်ငံရေးအကြံပေးခေါင်းဆောင်လုပ်နေတဲ့ ကိုကိုလှိုင်ဘဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြည်သူအများ သိကြပြီမို့ဒီ လူယုတ်မာ ကိုကိုလှိုင်ကို ငါးစား ဖားစာကျွေးဖို့ဆောင်ရွက်ကြဖို့ ဘဲ လိုပါတော့တယ်။
ယခုလည်း မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ မီးမလာလို့အမှောင်ထဲမှာ နေ့ စဉ် နေထိုင်နေရတဲ့ဘ၀၊ ရေမရှိလို့ရေငတ်ဒဏ်ကို ခံစားနေကြရတဲ့ ဘ၀တွေကို ကိုယ်ချင်းမစာသူတွေထဲမှာ ကိုကိုလှိုင်လည်း ထိပ်ဆုံးထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်နေပြန်ပါပြီမို့ကိုကိုလှိုင်ကို ပြည်သူ့ ပေးတဲ့ အပြစ်ဒါဏ် ခံစေဖို့ သာ ရှိပါတော့တယ်။
ဒီ လူယုတ်မာ ကိုကိုလှိုင်က သမတ အကြံပေးတက်လုပ်နေပြီး လျှပ်စစ်မီး မလာလို့ဆန္ဒပြကြတဲ့ ပြည်သူတွေကို အကြံပေးတဲ့စကားတဲ့ - "ဂျပန်မှာ Nuclear Facility တွေ ပြတ်သွားတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ကြောက်လန့်ပြီး Nuclear Plant တွေ အကုန်ပိတ်တယ်။ အခု စက်ရုံ ၄၀ မှာ နှစ်ခုပဲ ကျန်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဂျပန်မှာ မီးမပျက်ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပြည်သူက ခြိုးခြံချွေတာတယ်။ အဲ့ဒီတော့ စေတနာနဲ့ ပြောချင်တာက
ကျွန်တော်တို့ကလည်း ဖယောင်းတိုင်တွေကို ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်ထွန်းပြီး မီးလေးပိတ်ထားလိုက်ကြပါ။ အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။" …… လို့ပြောသွားပါတယ်။ ဒီနေ့နိုင်ငံတော်သမ္မတ အကြံပေးအဖွဲ့ ရုံးခန်းတွင် ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောသွားတာပါ။
လျှပ်စစ်မီးထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာ ရေလာမှာ ဖြစ်တာလားဆိုတာနဲ့ ၊ အခုမှ လျှပ်စစ်မီးက မလာတာလား၊ အခုမလာတဲ့ ရေကြောင့် မြန်မာပြည်ကြီး လျှပ်စစ်မီး မရတာလားဆိုတာတွေကို မေးမြန်းလိုပါတယ်။
Posted by Mr Htay Tint at 8:10 AM 1 comments
Published on 18 Apr 2012 by myanducation
ှSetting တွေမလုပ်တတ်လို့ မြန်မာစာတမ်း အပြီးထိုးပြီးသား ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာပါ၊
မြန်မာစာတမ်းထိုးကြည့်ရန် CC နေရာတွ Burmese Subtitile ကို ရွေးချယ်ပါ။ မပေါ်သေးလျင် CC .. Setting မှာ ဇော်ဂျီဖောင့်ကို ရွေးပါရန်.. Browser အား ဇော်ဂျီဖတ်နိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားသင့်သည်။ စက်ထဲတွင် ဇော်ဂျီရှိရမည်. ကြည့်မရသော သူများအတွက် ဗီဒီယိုထဲတွင် စာတမ်းအသေထည့်ထားပြီးသော နောက်တစ်ခု တင်ပေးပါမည်။ အရင်က တင်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုအဟောင်းကိုလည်း ဆက်မရှယ်ကြဖို့ သတိပေးပြပါရစေ၊ အရင် ဗီဒီယိုဟောင်းမှာ စာတမ်းထိုးထားတာ အမှားတွေ ပါနေလို့ပါ.. အမေ့ရုပ်ရှင်အတွက် အမှားလုံးဝမဖြစ်အောင် မလုပ်နိုင်ရင်တောင် အမှားအနည်းဆုံးပဲ ဖြစ်စေချန်ပါတယ်.In order to watch the movie in Burmese Subtitle, please make sure your web-browser is set to Zawgyi-one friendly and Click CC and choose Burmese subtitile or if you still cant see it go to CC setting and set the font to Zawgyi One. For those who having problem with viewing in Burmese I will upload another video which will include built in Subtitiles with better quality when I have time.
Posted by Mr Htay Tint at 2:39 AM0comments
( ရှစ်လုံးရဲ့ သမိုင်းကြောင်း )
လူမွေးရာမှာ တော်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက လူပျော့တွေ(သူရရွှေမန်း၊ ကွယ်လွန်သူ ၀န်ကြီးချုပ် စိုးဝင်း၊ လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ် သိန်းစိန်) တို့မှာ မရှိတဲ့ ဒီလို စရိုက်ဆိုးတွေနဲ့ ပြည့်တဲ့ သူကို လက်သပ်မွေးထားခဲ့တယ်။ ဘယ်လောက်အထိ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက မျက်နှာသာပေးခဲ့သလဲဆိုတော့ တပ်မတော်တခုလုံး ရဲ့ လက်နက်၊ ရိက္ခာ၊ အဆောက်အအုံ၊ ဘတ်ဂျက် စတာတွေကို စီမံကွပ်ကဲရတဲ့ စစ်ထောက်ချုပ်ရာထူးကို အငြိမ်းစား မပေးခင် ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်အထိ လုပ်ခိုင်းဖူးတယ်။ အလား တူပဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက သူ တလျှောက်လုံး တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ရာထူးကို မကြာသေးခင်က ယာယီလွှဲပေးပြီး ရုရှား၊ တရုတ်၊ အာဆီယံနိုင်ငံ တွေမှာလုပ်တဲ့ စစ်ဘက်အစည်းအဝေးတွေကို တက်ခိုင်းခဲ့တဲ့ အထိ မျက်နှာသာပေးခဲ့တယ်။ အခုလည်း ဒု သမ္မတ ရာထူးအတွက် စစ်တပ်ရဲ့တဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်နေရာ ပေးခဲ့တာကို ကြည့်ရင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးရဲ့ မျက်နှာသာပေးခြင်း က လျော့မသွားသေးဘူးလို့ ဆိုရမယ်။
လူရမ်းကား ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကို လိမ္မာသွားအောင် အစစ အရာရာ သင်ကြားပေးနေသူကတော့ မက်စ်မြန်မာ ဇော်ဇော်ပါပဲ၊ သူတို့နှစ်ဦး ဆက်ဆံရေးကို လူတွေက သားအဖလို့တောင် ပြောကြတယ်။ Trade Council ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူး ရခါစမှာ ကားသွင်းခွင့် ပါမစ်တွေကို စစ်တပ်ပိုင် ဦးပိုင်လီမိတက်ထက် မက်စ်မြန်မာ ဇော်ဇော်ကို အများဆုံးသွင်းခွင့်ပေးခဲ့လို့ လူကုံထံ ဇိမ်ခံကား ကနေ မီးသတ်ကား အထိ သုံးလိုတဲ့သူတိုင်း ဇော်ဇော် ဆီက ပြန်ဝယ်ရတယ်၊ အဲသည့်အတွက် ဇော်ဇော်က ကျေးဇူးဆပ်တဲ့ အနေနဲ့ သူ့ကို အချိုးကျ အ မြတ်ခွဲ ပေးရတယ်။
Posted by Mr Htay Tint at 11:57 PM0comments